ओली सँगको वार्ता रद्द गरी प्रचण्ड सुटुक्क सिन्धुली हिँडेपछि बाहिरीयो एकता बारे यस्तो खुलासा ! « Naya Bato
ओली सँगको वार्ता रद्द गरी प्रचण्ड सुटुक्क सिन्धुली हिँडेपछि बाहिरीयो एकता बारे यस्तो खुलासा !
काठमाडौं – नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच वैशाख ९ गते नै एकता हुन कठिन हुँदै गएको छ। जनयुद्धको सम्बोधन, चुनाव चिन्ह, एकीकृत कमिटीमा दुई पार्टीबाट रहने संख्याको अनुपातमा कुरा नमिलेपछि एकता अप्ठेरो मोडमा पुगेको हो। एमाले पक्षका नेता पार्टीको जन्म दिन वैशाख ९ गते नै एमाले र माओवादी एकता घोषणा हुने कुरामा ढुक्क छन्। यद्यपी माओवादीका नेताहरु वैशाख ९ गते नै एकता हुन कठिन हुने धारणा राख्दै आएका छन्।
माओवादीका पदाधिकारी मणि थापाले नेताद्वय ओली र दाहालबीच बैठक बस्दै, सोही अनुसार संयोजक समिति, कार्यदल र आआफ्नो पार्टीका विभिन्न निकायको बैठक बस्दै एकता प्रक्रियामा जाने बताए। उनले अन्नपूर्णसंग भने,‘ यो सबै प्रक्रिया पूरागर्दै वैशाख ९ गते नै एकता घोषणागर्न आवश्यक गृहकार्य पूरा हुने सम्भावना देखिदैन, त्यसैले पूर्व निर्धारित मितिमा एकता असम्भव छ।’ पार्टी एकतालाई अन्तिम चरणमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ एमालेका वरिष्ठ नेता माधबकुमार नेपाल र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच आइतबार बिहान वार्ता भएको जानकारी एमाले स्रोतले दिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ